जापानमा नेपाली कामदार यसरी लगिदै, पहिलो लटमा नर्स मात्रै !
नेपाली कामदार जापान पठाउने विषयमा दुई सरकारबीच गत चैत ११ गते ‘सहकार्यको समझदारीपत्र’ मा हस्ताक्षर भयो । तर, उक्त समझदारीको विस्तृत विवरण सरकारले अझैसम्म बाहिर ल्याउँदा जापान जान खुट्टा उचालेका युवाहरु अन्योलमा छन् । अहिले जापान पठाउने भन्दै देशभित्र भाषा परिक्षाको नाममा ठगीधन्दा मौलाएको छ । कतिपय कन्सल्टेन्सीहरुले आफैंले विदेश पठाउने आश्वासन दिएर ठगी गरेका तथ्यहरु पनि बाहिर आएका छन् । सम्झौता भइसकेको विषयलाई पनि गुपचुप राख्दा जापान जाने आशामा बनेका धेरै युवा ठगिने क्रम बढेको हो ।
यसबाहेक समझदारीका अन्य विषयहरुलाई गोप्य राखिएको छ । सबैलाई चासो छ, रोजगारीका लागि जापान कहिलेबाट खुल्छ ? यस विषयमा अनलाइन खबरले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाललाई सोधेको प्रश्न यस्तो छ । जसमा भुसालले खुलाए कि पहिलोपटक जापानले पहिलो लटमा नर्सहरुलाई मात्रै लैजानेछ । भुसालसँग गरिएको छोटो संवादः
सम्भवतः आगामी अक्टोबर (असोज १५ देखि कात्तिक १५) मा नर्सिङ क्षेत्रको लागि मात्र भाषा र सीप परीक्षा हुन्छ । यसलाई ‘नर्सिङ केयर जापाजिन ल्यांग्वेज इभ्यालुएसन टेस्ट’ भनिनेछ । साधारण जापानीमा लेख्न र बोल्न गर्न सक्नेले यो जाँचमा भाग लिन सक्छ । २० मिनेटको भाषा परीक्षा र ६० मिनेटको सीप परीक्षा हुन्छ । पास भए-नभएको परीक्षार्थीले तत्कालै थाहा पाउँछन् । जाँच दिएको दुई हप्तामा जाँचको प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ ।
जापानले अबको ५ वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने भनेको छ । नेपालबाट कति लैजाने भन्ने संख्या निश्चित छैन । समानुपातिक हिसाबले पनि बढीमा १३०० जना नर्स एक बर्षमा जान पाउँछन् कि भन्ने अपेक्षा छ । (वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालसंग अनलाइन खबरको कुराकानी ।)
* सर्पले टोके के गर्ने, के नगर्ने ?
एजेन्सी- गर्मी महिनामा सर्पदंशका घटना निकै बढ्छन्। खासगरी नेपालको तराईं भेगमा सर्पदंशका घटना बढी हुन्छन्। अमेरिकामा हरेक वर्ष ८ हजार मानिसहरु सर्पले टोकेर अस्पताल पुग्छन्। तीमध्ये ५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। अधिकांश अवस्थामा सर्पदंश खतरनाक हुन्छन्। सर्पले टोकेको स्थानमा पीडा हुने, सुन्निने हुनुका साथै तन्तुहरुलाई क्षति पु¥याउँछन्। यसका साथै आन्तरिक रक्तस्राब पनि गराउँछन्। अमेरिकी चिकित्सकले सर्पले टोक्दा के गर्ने र के नगर्न भन्ने विषयमा केही सल्लाह दिएका छन्।
सकेसम्म टोकेको स्थानलाई अलि अलि भएपनि चलाउनुपर्छ, यसले विष अलि ढिलो फैलन मद्धत गर्छ। सर्प कस्तो थियो भन्ने पनि याद गर्नुहोला। यसले चिकित्सकलाई उपचारमा सहयोग पुग्नेछ। सकेसम्म कुन स्थानमा टोकेको थियो भनेर पनि भन्नुहोला।
* सहयोग के हो ?, सहयोग किन गर्नुपर्छ ?
हुन त आरम्भकालदेखि नै मानिस सामाजिक प्राणी हो र उसले जुन उन्नति–प्रगति गरेको छ, त्यसको अधिकांश श्रेय उसको सहयोग वृत्तिलाई जान्छ। मानिसले यस संसारलाई आफ्नो निवास योग्य बनाएको छ, ठूला–ठूला पर्वत, ज·ल, सागरमा पसेर निर्वाहका जुन साधनहरूको खोज गरेको छ, जुन लाखौं आबादी भएका सुख–सुविधापूर्ण नगरहरूको निर्माण गरेको छ र सडक, रेल, जहाज आदिको विस्तार गरेर सम्पूर्ण संसारलाई एउटा घर बनाइदिएको छ, यी सबैको मूल आधार सहयोगको प्रवृत्ति नै हो। व्यापार–व्यवस्था, उद्योग–धन्दा, शिक्षा प्रचार, सुरक्षाको व्यवस्थाका क्षेत्रमा पनि आज जुन ठूला–ठूला योजनाहरू सफल भइरहेका देखिन्छन्,
सहयोगमूलक प्रवृत्तिहरूको नै परिणाम हो। यति मात्र किन विज्ञानको आश्चर्यजनक उन्नति, जनसेवा गर्ने विशाल संस्थाहरू, लोककल्याणका युग परिवर्तनकारी योजनाहरू सबैको सफलताको आधार मानिसको पारस्परिक सहयोग नै हो। मानिस जति बढी परिमाणमा र जति हार्दिकताका साथ सहयोग भावनाको परिचय दिन्छ त्यति नै बढी सफलता यी विषयहरूमा पाइन्छ।
मानवमात्रको एकताको सिद्धान्त नौलो कुरा होइन। हाम्रा मनीषीहरूले त यसलाई हजारौं वर्षपूर्व ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ अथवा ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ जस्ता सूत्रद्वारा प्रकट गरिसकेका छन् र यहाँका हजारौं भक्त तथा सन्तहरूले त्यस अनुसार आचरण गरेर पनि देखाइदिएका छन्। आज पनि यताका महापुरुष यसै सत्यलाई अनुभव गरेर, त्यसलाई संसारव्यापी रूप दिने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यद्यपि माथिमाथिबाट हेर्दा मानिस घोर स्वार्थतर्फ प्रेरित लाग्दछ र एउटा यस्तो सङ्घर्षको तयारीमा संलग्न भइरहेको छ, जसले मानवी सभ्यताको सर्वनाश नै सम्भव देखिन्छ।
तर यसका साथै यो पनि स्पष्ट छ कि मानवताको एकताको सन्देश यस बेला सबैको कानसम्म पुगिसकेको छ र त्यसले उनका आत्मालाई झक्झक्याइरहेको छ। जुन कुरालाई पहिले केही मनीषीले मात्रै भन्दथे र बुझ्दथे, त्यो अब सामान्य मानिसको मनमा पनि आउन थालेको छ। यसबाट के आशा पलाएको छ भने विनाशको कालो बादल देखिए तापनि अन्तमा सहयोगको सूर्य नै बढी शक्तिशाली सिद्ध हुन्छ र संसार अन्धकारमय प्रदेशबाट निस्केर सार्वजनिक सुख–शान्तिको सुप्रकाशित युगमा पुग्नेछ।
सहयोग तथा मैत्रीको यो भावना सामूहिकरूपमा संसारको कल्याण गर्ने मात्र होइन वरन् व्यक्तिगत दृष्टिले पनि त्यो मानुष्यमात्रका लागि हितकारी छ। यसको प्रभावले मैत्री–भाव राख्ने व्यक्ति सबै प्राणीहरूको सुहृदय बन्न सक्छ। जब उसले आफ्नो हृदयमा कसैप्रति शत्रुताको भाव राख्दैन भने अरू कसैको मनमा पनि उसप्रति विरोधभाव उत्पन्न हुनै सक्दैन र ऊ दुनियाँबाट निर्भय बन्न पुग्दछ। यदि संयोगवश उसले कुनै कष्ट पनि सहनुपर्दछ भने त्यसलाई दैवी विधान अथवा आकस्मिक दुर्घटना ठानेर अलिकति पनि क्षुब्ध हुँदैन।
ऊ कुनै मानिसलाई यसको कारण मान्दैन यसैकारण सबै प्रकारका चिन्ता र भयबाट मुक्त रहन्छ। पारस्परिक वैमनस्य अथवा मनोमालिन्यका भाव निरन्तर बढ्दै रहनाको कारण जुन अगणित समस्या उत्पन्न भएर मानव जीवनको कष्टपूर्ण बनाइदिन्छ, त्यो ती सबबाट मैत्री–भावनाद्वारा नै जोगिन्छ।